The Kpop Times - ၂၀၂၀ အတွက် Kpop ဘုရင်တွေက ဘယ်သူတွေလဲ
KingChoice ဆိုတာကတော့ မတူညီတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေနဲ့ သီတင်းပတ်အနည်းငယ်တိုင်း လူထုစစ်တမ်းကောက်ခံမှုမှာ ပရိသတ်တွေက ဝင်ရောက်မဲပေးနိုင်တဲ့ နာမည်ကျော် Kpop မဲပေးတဲ့ site လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
မကြာသေးခင်တုန်းက သူတို့ဟာ “King of K-Pop 2020” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ပရိသတ်တွေကို မဲပေးခိုင်းခဲ့ပြီး အမျိုးသား Idol ၂၅ ယောက်ကိုရွေးထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍတွေကို အခြေခံပြီး အခုနှစ်ကို လွှမ်းမိုးထားနိုင်တယ်လို့ ပရိသတ်တွေ ယူဆတဲ့ အမျိုးသား Idol တွေကို မဲပေးခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လာမယ့် အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်မှာတော့ အဲ့ဒီမဲပေးမှု အဆုံးသတ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုဖော်ပြမှာကတော့ ပရိသတ်တွေ မဲပေးခဲ့ကြတာကို အခြေခံထားတဲ့ ထိပ်တန်း Kpop ဘုရင် ၂ ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
25. Eunhyuk (Super Junior)
24. Suho (EXO)
23. Kai (EXO/SuperM)
22. Taeyong (NCT/SuperM)
21. Baekhyun (EXO/SuperM)
20. Chanyeol (EXO)
18. Donghae (Super Junior)
17. Jackson (GOT7)
16. Sehun (EXO)
12. Kang Daniel
8. Eunwoo (ASTRO)
6. Yonghwa (CNBLUE)
4. Taemin (SHINee/SuperM)